Graphite Ikubumbe for Precious Metal Abavelisi & Suppliers | I-China Umsizi weGrafayithi weFektri yeXabiso eliPhezulu
Umshini aluminized grafayithi ngokuyinyibilikisa
Le mveliso yigrafayithi ekroliweyo esetyenziswa kwizixhobo zokuqaqambisa ukukhanya. Ezincamathelayo aluminized grafayithi ngokuyinyibilikisa iveliswa unyango olulodwa, uye ubomi inkonzo ultra-elide, ngokubanzi ngaphezu kweeyure ezingama-45.
Ukunyibilikisa isinyithi yinkqubo yokutshintsha kwesinyithi ukusuka kwimeko edityanisiweyo yenze inkululeko. Ukunciphisa ukuphendula kwekhabhoni, i-carbon monoxide, i-hydrogen kunye nezinye izinto zokunciphisa nge-oxides zetsimbi kwiqondo lokushisa eliphezulu kunokufumana izinto zetsimbi.
Isangqa esinye sokuhlambuluka kwe-graphite ngokuyinyibilikisa izinyithi ezixabisekileyo
Ukunyibilika kwesinyithi okuxabisekileyo kwahlulwe kwaba kukurhabaxa kunye nokucoca. Ubunyulu obuphezulu bezinyithi ezixabisekileyo zifunyanwa ngokunyibilikisa ubunyulu obuphantsi bezinyithi ezixabisekileyo. Grafayithi ngokuyinyibilikisa esetyenziselwa ukusulungekisa isidingo semfuno ephezulu kubunyulu, ubuninzi bobunzima, porosity, amandla kunye nezinye izikhombisi. Imathiriyeli luxinzelelo lwe-isostatic okanye igrafite ebunjiweyo ngokudipha kathathu kunye nokubhaka ezine. Ukuqhutywa kwemfuno kungqongqo kakhulu, ayisiyiyo kuphela ubungakanani buchanekileyo, kodwa kunye nomphezulu wokucoca. Izinto zethu zegraphite zivavanywa ngokungqongqo kwaye zikhethwe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba zinokuhambelana namandla, isiphumo sokufudumeza sesona silungileyo, kwaye itekhnoloji yokuqhubekeka kufuneka ihlangabezane neemfuno zoyilo.
Isangqa esineentsimbi ezimbini zegrafiti yokunyibilika yokunyibilikisa isinyithi esixabisekileyo.